Qalisa iphedi ye-adventure - I-Airbnb
Qalisa iphedi ye-adventure
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJules
Ukuba awuyazi okwangoku, kungekudala uya kufumanisa ukuba ibaluleke kangakanani le ndawo. Nokuba kukuNqabela, (urhwebo, umdlalo, okanye umkhenkce), ukuntywila esibhakabhakeni, ukukhwela ibhayisekile (iNtaba, igrabile, okanye indlela), ukubaleka kwendlela, okanye ukukhwela intaba ndazise ukuba ndingaluncedo.
Ukusuka ekhitshini labapheki ukuya kwi-adventure yakho ukuya kwibhafu yokuhlambela yentsimbi ukuze uthomalalise izihlunu zakho ezibuhlungu, le ndlu inomtsalane iyilwe ngobuchule ukuxhasa imfuno yakho yangaphandle.
Le ndlu ineminyaka eli-100 ubudala ikwiikhilomitha nje ezimbini ukusuka kwidolophu eqhelekileyo yaseGardiner, NY ibonelela ngezimvo eziphefumlayo zeShawangunk Ridge, nje imizuzu engama-90 ukusuka eNYC.
Indawo ekufutshane ejikelezileyo ininzi ngamabhoma ee-apile, iifama ezincinci ezizimeleyo, ii-wineries kunye ne-distillery edumileyo yehlabathi. Iifama ze-Organic ezingaphantsi kweemayile ukusuka endlwini zibonelela ngemifuno emitsha yexesha lonyaka, iijam, iipayi, kunye nolunye ulonwabo lwasefama.
Indawo yokuhlala ekumgangatho wesibini ifuna ukunyuka izinyuko ezincinci ngoko ke siyakucebisa ngokuchasene nokukhetha indlu yethu ukuba unenkxalabo enkulu yokuhamba.
Le ndlu inendawo yokufudumeza yendawo yangoku kunye nenkqubo yomoya ephakathi nendawo eyenza utyelelo lwasebusika olupholileyo kunye nokuhlala ehlotyeni okupholileyo. Indlu igqunywe ngamagwebu ngoko ke ifudumele ebusika kwaye ihlala ipholile ehlotyeni.
Kumgangatho wesibini kukho amagumbi amabini okulala, elinye linebhedi yeKing size nelinye linebhedi ezimbini ezingamawele. Ugxininiso luthuthuzeleke, kunye neelinen eziphezulu kunye nemithwalo. Kukho igumbi lokuhlambela elikhulu elinesiqingatha eliphakathi kwamagumbi okulala aphezulu.
Kukho igumbi lokulala kumgangatho wokuqala elinebhedi enkulu yokumkanikazi kunye nesayizi yokumkani yokutsala isofa kwigumbi lokuhlala elikumgangatho wokuqala. Kukho i-sofa enkulu kunye negumbi lokuhlala.
Onke amagumbi agcwele ukukhanya kwaye ajonge phezu kwemithi kunye nohlaza.
Indawo yokutyela ekhitshini epheleleyo idibanisa ukudala indawo yokonwabisa egqibeleleyo, enomgangatho obanzi webhodi yepine kunye nendawo enkulu evulekileyo yokuziva. Ikhitshi lixhotyiswe ngezinto zokubala zamatye, i-oveni yeconfectional yanamhlanje, uluhlu lwesitshisi segesi esithandathu kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko ezibandakanya iintlobo ngeentlobo zezixhobo zokupheka ezisemgangathweni, ucinezelo lwekofu yaseFransi, iketile yombane kunye neprosesa yokutya. Kubonelelwe uluhlu lweziqholo, ioli yeoli, i-balsamic, ikofu kunye neeti ezikhethiweyo. Zonke iiglasi kunye neeflatware zezona zikumgangatho ophezulu.
Itafile yegumbi lokutyela inokuhlala isithandathu ukuya kwesibhozo kunye nokongezwa kwegqabi.
Kukho igumbi lokuhlamba elinewasha kunye nesomisi elibekwe kwigumbi lodaka elifanelekileyo.
Indlu ilala 4-6 kuxhomekeke kumalungiselelo okulala.
*Sinomgaqo-nkqubo ongqongqo wokuba Akukho kutshaya kwaye Akukho zizilwanyana zasekhaya.
*Siza kuhlala sizama ukuguquguquka ekungeneni kwethu kwaye sijonge amaxesha ukuba sinako, ke nceda ubuze!
Ukuwa amahlamvu kule ndawo ... emangalisayo. Iingcebiso kwivenkile yamandulo xa uceliwe. Izindululo zokutyela xa uceliwe.
I Love the outdoors and love to share activates of all kinds in all seasons with others.